Haka ohatra isika izay fahitatsika ara-barotra.
- Mividy pneus 4 dia mahazo roue de secours iray.
- Raha mividy entana roa mitovy vidy, dia omena anao amin'ny vidiny iray ireo entana roa ireo.
Efa nambaratsika hatrany fa amin'ny varotra tiana ahazoana tombony, dia raha mividy entana iray ianao, dia tokony amidy avo roa heny tamin'ny vidiny nividianana azy ilay entana, satria misy ny sarany ankoatran'ny masokarena nividianana ny entana (marge brute).
Entana novidiana 50ar izany, tokony amidy 100ar (100%).
Tsy tombom-barotra akory ny 100% satria
- Karama mpiasa 30%
- Fampandehanan-draharaha, hofatrano, Jirama, téléphone, fitaterana...30%
- Vidin'entana sy famokarana 30%
- Hetram-panjakana, zana-bola banky 10%
- Tombom-barotra 5-10%
Ka raha pneus 4 izany no novidiana 100 000ar, dia amidy 100 000ar x 2 = 200 000ar.
Pneus 4 izany vidiana = 100 000ar x 4 = 400 000ar dia ho amidy 400 000ar x 2 = 800 000ar
Ka raha natao kadoa izany pneu iray raha mividy 4, dia :
Masokarena 5 pneus x 100 000ar = 500 000ar.
Amarotana ny pneu 5, vidiny 4 = 4 x 200 000ar = 800 000ar
Tombom-barotra mbola tsy nialana hofatrano sy Fampandehanan-draharaha ary karama izany (marge brute):
800 000ar - 500 000ar = 300 000ar.
Izany hoe 300 000ar/pneus 5 no lafo = 60 000ar/pneu
Izany hoe pneu novidiana 100 000ar, dia namidy 160 000ar izany no tena izy, fa fomba filaza fotsiny ilay hoe 200 000ar no vidin'io pneu io, ka raha mividy 4, dia omena kadoa 1 fanampiny.
Izany hoe nanome remise commerciale 40% izany ilay mpivarotra. Dia taitra tokoa ny client hoe betsaka izany fihenam-bidy izany, fa raha ny marina mbola nitana 60% marge bénéficiaire izy.
Toy izany koa ny Banky iraisam-pirenena, nanome remise commerciale 50% izy, fa fomba filaza ny hoe Don ny antsasany.
Ahoana izany ?
Raha nampindram-bola 200 000 000 de dollars an'i Madagasikara izy.
Averina mandritra ny 30 taona io vola io, amin'ny zana-bola 1.5-3% eo isan-taona.
Izany hoe 200 000 000$ x 3% = 6 000 000$ isan-taona ny zana-bola, ka mahatratra 6 000 000$ x 30 taona= 180 000 000$ ny zana-bola na tombony ho azy.
Efa hitovy amin'ny renivola nampindraminy ny marge commerciale nalainy, io ilay hoe raha mividy entana iray, dia amidio avo 2 heny, marge brute 100%.
Eto izy izany dia 200 000 000 + 180 000 000 = 380 000 000$ ny amarotany ny vola 200 000 000$, satria ny banky dia ny VOLA no entana amidiny, mpivaro-bola izy izany.
Ka raha nilaza izy izany hoe 100 000 000$ tsy averina dia 280 000 000$ izany no aloa aminy.
Izany hoe 80 000 000$ ny tombom-barotra nalainy, na zana-bola 80 000 000$/200 000 000$ = 40%
Fa notsinjarainy isan-taona ny fanefàna azy, mode de paiement, dia toa kely mora atelina sy tsara henoin'ny sofina, 40%/30 taona= 1.33% monja.
Izay no taux de crédit banque mondiale manodidina ny 1-1.5%/an eo hatrany.
Ny an'ny banque primaire, na ireny banky eto an-toerana ireny manodidina ny 9-12% raha ampitrosa vola fanjakana, averina alohan'ny 5 taona, izany hoe zana-bola 10% x 5 ans = 50% marge brute.
Raha banky eto Madagasikara ampitrosa olo-tsotra na Orinasa, dia 20-22% zana-bola, averina 24mois na 2 taona = 22% x 2ans = 44% marge brute.
Raha micro finance dia lazainy fa 6% ny zana-bola, fa tsy lazainy hoe 6% isam-bolana io, Dia 6% x 12 = 72% isan-taona.
Nefa ny azy 6 volana matetika dia averina, izany hoe 6% x 6 = 36% eo marge brute.
Ny Mvola sy Orange money.
Maka 1 000 000ar mamerina 90 000ar zana-bola, Ary 1 volana ihany. Izany hoe 9% isam-bolana na 9% x 12mois = 108%/an.
Manana anjaran-toerana lehibe izany ny Banky eo amin'ny firenena iray, satria izy no afaka anafohy ny fiandrasana ny fanangonam-bola ahafahana manao dingana ao anatin'ny fotoana fohy ny famadihana ny nofinofy sy ny vina izay eo amin'ny tsirairay, ho lasa Zavatra azo tanterahina.
Eto amitsika dia tapitra namidy tamin'ny vahiny avokoa ny bankitsika, ary na ny banky foibe aza, dia ny fepetra apetraky ny vahiny no mifehy azy.
Ny vola Malagasy MGA rahateo, dia mitondra anaram-bositra fotsiny hoe Ariary, fa mitsingevana manaraka ny onjan'ny vola vahiny Dollar sy Euro ihany.
Mila mahaleo tena ny vola Malagasy ka foanana ny MID, ary atsangana ny Banky tena Malagasy ka andraisan'ireo Malagasy na vahiny te ampiasa vola eto Madagasikara.
Ampindram-bola ireo tanora te hanangana Orinasa, ampindram-bola amin'ny zana-bola ambany amin'ny seha-pamokarana, amin'ireo te hanamboatra trano, ampindram-bola ny Fokontany sy Kaominina na Faritra, manana teti-kasa ary mahaverim-bola amin'ny harena azony trandrahana ao aminy.